Faraska Ardennes, oo ah mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn jilitaanka | Fardaha Noti
Toddobaadkan waanu kulmi doonnaa mid ka mid ah faracyada ugu faca weyn fardo fardood taas oo jirta: fardooleyda fardo. Waxay kala yihiin Lagu soo barbaaray Ardennes, Belgium, Luxembourg iyo France. Laakiin taariikhdeeda waxay dib ugu laabanaysaa waqti dheer, Rome qadiimiga ah.
Waa isku mid waxaa badanaa loo isticmaalaa howlaha beeraha ama meelaha lagama maarmaanka u ah dhaqaajinta ama rarida waxyaabaha culus, sidoo kale soo saarista hilibka, dhacdooyinka tartanka iyo in looga gudbo noocyo kale.
Aynu wax yar ka sii hadalno iyaga.
Sidoo kale loo yaqaan Ardennes Dart Faras, waxay leeyihiin ay asal ahaan 50.000 sano ka hor, ahaanshaha farac toosan oo ka mid ah kalluumeysatada matalaya sawirada godka. Iyagu sidoo kale waa awooweyaasha inta ugu badan ee farac qabyada ah.
Noocyada faraska ee qabyada ah ayaa si ballaadhan loogu isticmaali jiray waqtiyadii hore xoog wadis ahaan. Noocyada hadda jira, sidaan ku naqaano, waxay bilaabeen qiyaastii qarnigii XNUMX-aad. Waxaa lagu xushay oo laga talaabey baahiyaha militari, beeraha iyo warshadaha, si ay u qabtaan shaqooyin gaar ah oo laxiriira culeysyo, hadey dhaqaajinaysay mashiin ama rarida alaabo culus.
Gaar ahaan, noocyada su'aasha ah ayaa isbeddelay dhammaan sannadihii ay taariikhdu jirtay, noqoshada fardo xoog badan, aad u diyaarsan oo nolosha ka buuxa.
Hadda waxay ka mid yihiin meelaha ugu horreeya liiska fardaha Faransiiska ee qabyada ah, ka dib Percheron, Bretons iyo Comtois.
Nooca ku saabsan fardaha qabyada ah ayaa loo qaybiyey fardaha culus ee fudud iyo fardaha nooca fudud. Midkii hore, oo dhererkiisu u dhexeeyo 170 cm ilaa 180 cm culeyskiisuna yahay 600 illaa wax ka yar 1000 kg, ayaa loo isticmaalay in lagu dhaqaajiyo mashiinada iyo walxaha culus. Qaybta dambe, oo ka fudud culeyska, waxaa loogu talagalay safarka xawaaraha sare (ka weyn socodka) waxayna la xiriirtaa gawaarida fudud. Kuwa dambe ayaa sidoo kale loo isticmaalaa tartamada kalluumeysiga.
Ardenes waa dhexdhexaad u dhexeeya iftiinka iyo culeyska. Iyadoo miisaan leh inta udhaxeysa 700 ilaa 1000 kg iyo joog inta u dhexeysa 152 cm iyo 163 cm, Iyagu ma aha kuwa ugu waaweyn fardaha jilicsan, mana aha kuwa ugu yar, waana iyaga, maadaama laga dhex helo noocyada culus iyo kuwa fudud, nooc qabyo ah oo nooc ah.
Waxay ku saabsan tahay sinnaanta aad u adkaysta oo ku noolaan kara dhibaatooyinka cimilada ee quud yar. Waxay ballaadhan yihiin, muruqyo iyo is haysta, leh gaaban, lugaha qaro weyn. Waxaas oo dhan ayaa iyaga ka dhigaya iyaga fardo xoog badan. In kasta oo ay leeyihiin dhammaan xooggan jidh ahaaneed iyo xoogba, haddana dabeecad bay leeyihiin caajis iyo fududahay in la isticmaalo, sidoo kale waxay leeyihiin kalluun nool.
Waxay leeyihiin mid madaxa ballaaran leh indhaha muujinta iyo dhagaha fiiqan, Oo ku tiirsan qoorta ballaaran. Maansooyinkoodu waa badan yihiin oo timo dhaadheer ayaa ku leh addimada.
Sida dhogorta ay leeyihiin, way soo bandhigi karaan lakabyo leh midabbo kala duwan: roan, cabeeb, xabadka ama xabadka, mararka qaarkood qaar timo cad meelaha qaarkood, sida madaxa ama lugaha. Midab aan loo ogoleyn tarankaani waa madow.
Sida fardaha oo dhan, waxay kuxirantahay shaqada ay qabanayaan, waxay ubaahan yihiin cunto cayiman iyo daryeel si loo ilaaliyo caafimaadkooda iyo xaaladooda wanaagsan.
Sidii aan filaynay bilowgii maqaalka, waxaan wajahaynaa runtii faras duug ah oo duug ah. Waxaa jira xog qaar ka turjumaya tan, sida inay horeyba u jireen oo uu ku sheegay boqorka Roman Julius Caesar akoonkiisa ku saabsan qabsashadii Gaul, Halkaas oo uu kaga hadlay iska caabinta weyn ee isbarbar dhigaas.
Waxay ku nooshahay gobolka Faransiiska iyo Biljamka ee Ardennes, halka magaceedu ka yimid, ilaa 2000 oo sano. Waxaan sidoo kale ka helnaa arden iswidhish, natiijada ka soo gudubka fardaha waqooyiga dalka.
Farqiga udhaxeeya Beljamka ee faraska Ardennes wuxuu asal ahaan kasoo jeedaa buuraha laftooda.
Taariikhda noocyadan oo dhan waxaa lagu dhex qasay dhiigyo kale oo Ardennes ah. Iyo, sida ay ula mid yihiin kuwa badan oo gobolka ku yaal, waxay u badan tahay in xoogaa dhiig Carab ahi ka dhasho duulaankii Islaamka ee Yurub. Mar dambe, qarnigii XNUMX-aad, si loo fududeeyo taranka loona wanaajiyo iska caabinta, waxaa la ogsoon yahay in lagu dhex qasay fardaha Carabta..
Waxaa la rumeysan yahay in tartanka hadda socda, uu ka soo degay fardo dagaal loo adeegsaday qarniyadii dhexe.
Maxay cadahay inay yihiin baahida sare ee waajibaadka dagaalka, aad u badan loogu talagalay fardooley fardooley ah iyo sida faras qabyo ah oo loo jiidayo walxaha madaafiicda. Si aan u bixinno dhowr tusaale oo loo adeegsaday waxaan leenahay duullaankii Ruushka ee ciidamadii Napoleonic ama Dagaalkii Koowaad ee Adduunka.
Dhamaadka Qarnigii XNUMXaad, iskutallaabtoodii Le Brabant waxay dhalisay sinnaan xitaa ka sii xoog iyo weyn, aad ugu habboon shaqada beeraha iyo dhirta.
Le Brabant waa faras qabyo ah oo reer Beljam ah, oo lagu garto garaadkiisa iyo cabirkiisa weyn iyo muruqyadiisa. Ragga dhererkoodu waa 170 cm, dheddiguna 166 cm. Waxay leeyihiin muuqaal xoog leh oo faras jilicsan oo ay la socdaan dabeecadooda dabacsan iyo dabacsan. Astaamahan oo dhan waxaa loo gudbiyay faraska qabyada ah ee Ardennes si kastaba ha noqotee, Natiijo ahaan, nooca fardaha hadda jira ee Arden wuxuu aad ugu eg yahay Brabant.
Isku mid ahaanshaha waxay ahaayeen la keenay Mareykanka qarnigii XNUMXaad, kii ugu horreeyay ee la duubay wuxuu ahaa 1920-meeyadii.
Hadda waxaa laga kiciyey buuraha Faransiiska iyo Biljimka, in kasta oo laga heli karo gobollada Iswiidhan ee kala duwan. Waxay ku qasmeen jinsiyadaha Yurub iyo Aasiya dhiig qabow, si loo hagaajiyo astaamaha noocyadan, kordhinaysa cabirkeeda iyo xooggeeda.
Maanta wali waxaa loo adeegsadaa mararka qaarkood, shaqaynta beeraha yaryar, beero canab ah iyo kaymo. Waxaa sidoo kale loo soo kiciyaa ugu horreyn suuqa hilibka.
Tirada tijaabooyinka noocani uma badna sidii kuwii hore, laakiin Wali waa nooc caan ah tartamada iyo bandhigyada lagu qabto Waqooyiga Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Faraska Ardennes, waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn